ऐनाहरु भित्र लुकेका अनेकौं रहस्यहरु
सिन्धुली २ मंसिर- सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका–५, मुलकोट नजिकै रहेको रिट्ठे भीरको तल अक्कर भीर र सुनकोशी नदी रहेको छ । काठमाडौंबाट बनेपा–धुलिखेल–भकुण्डेबेसी– नेपालथोक हुँदै खुर्कोट नजिकै रहेको ठाउँ हो रिट्ठे भीर । जुन ठाउँको सडकमा हजारभन्दा बदी ऐनाहरु टाँसेको देख्न सकिन्छ ।
पूर्वी पहाड र मध्य तराईबाट राजधानी भित्रिने सबैभन्दा छोटो दूरी हो बिपी राजमार्ग । जहाँ दैनिक हजारौँ सवारी साधन चल्ने गदर्छ, जुन मार्गलाई जापान सरकारले २५ अर्बको लगानीमा निर्माण गरेको हाे । यो दृश्य देख्ना साथ सबैको मनमा एक किसिमको काैतुहलता पैदा हुनु स्वभाविकै हो। सडकको भित्ताभरी ऐना टास्नुको पछाडि धेरै कुराहरु लुकेको छ । जब कोही यात्रु होस् अथवा सवारी चालक त्यहाँ पुग्नु अगाडि नै सबैको मनमा एक किसिमको ड’र पैदा हुन्छ । जुन ठाउँ धेरै दु्र्घ’टना हुने गर्दछ ।
केही तथ्यलाई हेर्दा विसं २०५८ वैशाख २० गते सिन्धुलीबाट काठमाडौं जाँदै गर्दा मुलकोट नजिकै रहेको रिट्ठे भीरमा बस ख’स्दा १४ जनाको मृ’त्यु भएको थियो । २०६८ असोज २६ गते त्यसै ठाउँमा बस ख’स्दा बसका सबै यात्रु ४२ जनाको मृ’त्यु भएको थियो । त्यसको ठिक छ वर्षपछि २०७६ असोज २६ गते ६ जनाको मृ’त्यु भएको थियो । जुन ठाउँमा धेरै यात्रुहरुले ज्या’न गु’माएका छन् ।
स्थानीयहरुले त्यस कुरामा गम्भीर भएनन् । त्यसको केही समयपछि यात्रुवाहक वस शुनकोशी नदीमा खस्दा ४२ जनाको मृ’त्यु भएको थियो, जसको आत्माले शान्ति पाओस् भनेर सप्ताह पनि लगाइदिए स्थानीयहरुले । सप्ताह लागेको बेला एक्कासी एउटी महिलामा देवी उत्पन्न भएर उनले बाेकेको भरमा कोशीमा गएर सेतो ढुङ्गा लिएर एउटा रुखको जराको सेतो र रातो कपडाको धोजा बनाएपछि मन्दिर बनाएको स्थानीयहरु बताउँछन् । देवी मातालाई मन पर्ने भनेर ऐनाहरु राखियो । बिस्तारै ऐनाले धेरै संख्या लिन पुग्यो ।
ऐनाको दृश्यमा भुतप्रेत आउने नसक्ने र मानिसलाई दुःख दिन नसक्ने भएकाले यस स्थानमा ऐना राख्ने गरिएको जनविश्वास रहेको छ । आजभोलि त्यस स्थानमा जाने जोकोहीले पनि ऐना टाँस्ने गर्दछन् । यात्रु होस् या सर्वसाधरण त्यस ठाउँमा पुगेपछि केही समय रोकिएर ढोग्ने गर्दछन् । अझै पनि त्यहाँ पुग्नु अगाडि नै मानिसहरुको मनमा एक किसिमको ड’र पैदा हुने गर्दछ ।
हाम्रो समाचारमा कुनै गुनासो, सल्लाह वा प्रतिकृया भए news.himalayadaily0@gmail.com मा इमेल पठाउन सक्नुहुनेछ ।
दैबको यो कस्तो लिला ! अमेरिका पुगेको २ महिनामै बाकसमा फर्किदै झापाकी बर्खा !
चिडियाखानामा रहेका ५ सुगाले जब मानिसहरूलाई यस्तो ‘अश्लील’ गाली गर्न थाले (भिडियो)
पातलो चट्ट मिलेको जिउडाल, साथमा लठ्ठै पार्ने माैनीको पोज ! हेरौँ १० तस्बिर
‘सेक्स’वाला स्कुटरका कारण कलेजकी छात्रालाई पर्यो आपत !
कार्यक्रममा यी गायिकाको अचानक ड्रेस खसेर ‘स्तन’ देखिएपछि हंगामा (भिडियोसहित)
पातलो मिलेको शरीर, छिनेको कम्मरः लट्ठै पार्ने मौनिको सुन्दरता, हेरौ ११ तस्बिरमा
जालीदार पहिरनमा बोल्ड बर्षा [फोटो फिचर]
नायक निखिल उप्रेतीले गरे श्रीमतीसँग डिभोर्स: दिए भक्तपुरको घर र ५० लाख
३६ वर्षेले भित्राए ८२ बर्षकी दुलही: भन्छन्- ‘पुर्ण सन्तुष्टि मिलेको छ’
घेराबन्दीमा पारेर ‘मारियो’ भूपेन्द्रलाई, अधुरै रह्यो उनको त्यो एउटा सपना !
दिदीलाई लिएर भाइटीकाको किनमेल गर्न जाँदै थिए लाहुरे भाइ तर कस्तो बज्रपात पर्यो..
दैव पनि कती निष्ठुरी ! घर पुग्ने नपाई बाटोमै अस्ताइन् गुल्मीकी प्रतिभाशाली चेली सुस्मिता !
खानदानकी जस्ती देखिने युवतीको ठगी धन्दा: परपुरुषसँग ‘यौन सम्बन्ध’ राख्दै, पैसा उठाउँदै
सानैमा आमाले छोडेर गइन्, बुबा र दाईलाई दुर्घटनामा गुमाए, आफुपनि दुनियाँ रूवाउदै अस्ताए
१८/१९ वर्षकी एयरहोस्टेसको आँखा रसाएको देखेपछि बुढीआमा सम्झिएर प्लेनमा भक्कानिए (भिडिओ)
मध्यरातमा प्रकृती नै निष्ठुरी बनेर आयोः अस्ताए एकै घरका कलिला मुनाहरु…
दुवईमा भएका श्रीमानलाई फोन गरेर श्रीमतीले भनिन्- ‘म त संसार छोडे है’, नभन्दै…..
लुकेर अमेरिका छिर्ने क्रममा ५ दर्जन नेपाली पक्राउः भन्छन्- आमाबुबाले सुने चिन्ताले मर्नुहुन्छ’
यीनै हुन सेतीमा खसेकी पबित्राः चिच्याउँदै भनेकी थिइन्, तलाईं विशालको कसम… [भिडियो]